kbs — Sun, 04/12/2009 - 12:54
आधुनिक गीत, लोकगीत, लोकदोहोरी, पपगीत, रायप, हिपप जनचेतनाका गीतहरू, बालगीतहरू, राष्ट्रिय गीतहरू मात्र नभई भजन, धार्मिक गीतहरूसमेत म्युजिक भिडियो निर्माण गरी विभिन्न टेलिभिजन च्यानलमा प्रसारण गर्ने गरेका छन् ।
kbs — Sun, 03/15/2009 - 09:07
नेपाली सिनेमाले २०४६ सालपछि संख्यात्मक हिसाबले फड्को मारेको छ । सिनेमा उद्योगप्रति सरकारी नीति पनि त्यति अनुदार छ भनेर भन्न मिल्दैन किनकि राष्ट्रिय चलचित्र विकास बोर्डको गठन हुनुअघि नै नेपाली सिनेमा निर्माताहरूलाई मनोरञ्जन करको ठूलो हिस्सा सरकारले फिर्ता दिन थालेको थियो । तर गुणात्मकरूपमा नेपाली सिनेमामा खासै सुधार भएन ।
kbs — Mon, 03/09/2009 - 17:50
kbs — Tue, 03/03/2009 - 20:25
kbs — Sat, 01/17/2009 - 20:59
पुराना सम्झना केलाउँदा सङ्गीत क्षेत्रका मेलवादेवी, मित्रसेन, तथा नेपालका आदि गायक सेतुराम बारे सम्झना हुन्छ । यी तिनै जना प्रसिद्ध गायक गायिकाका कलकत्तामा रेकर्ड गरिएका ग्रामोफोन रेकर्डहरू हाम्रो घर गहिरीधारा र विशालनगरमा बज्ने गर्थे र म आनन्दसाथ सुन्ने गर्थें । नेपाली सङ्गीतका पहिलो गायक भारतको भाक्सुका नेपाली गायक माष्टर मित्रसेनको अवसान भइसकेको थियो । त्यस्तै मेलवादेवी काठमाडौं छोडेर कलकत्तामा बस्ने गरेकी थिइन् ।
kbs — Sat, 01/17/2009 - 11:38
वनको बाटो लाल्टिनै बालेर
स्वर सुहाउँदो स्केल र ६/८ बिट भएको लोकगीत होला, मैले सानो छँदै सुनेको थिएँ । माथिको दुई लाइनबाहेक अरूमा के-के छ, त्यो मलाई थाहा छैन । धेरैलाई सोध्दा अरूहरूलाई पनि थाहा रहेनछ । यसको ट्युन पेन्टाटनिक स्केलमा छ र लाग्छ— यो पहाडवासी नेपाली जनजातिको गीत हो, तर यसको स्वर रचना 'पुरातन शैली'को लाग्छ । लाल्टिनको आविष्कार भएपछि मात्रै यो गीत रचिएको हुनुपर्छ ।
kbs — Sat, 12/06/2008 - 20:23
चानचुन नब्बे वर्षभयो- मेलवादेवीले झन् पर जान्छु झन् माया लाग्छ सानु रेलैमा... गीत रेकर्ड गराउनु भएको । चन्द्र शमशेरको दरबारमा उनका करिब तीन सय सुसारेहरुमध्ये कुनै एउटीले मेलवादेवीको स्वरको डाहा गरेर स्वर बिग्रने पदार्थ विशेष खुवाइन् । चन्द्र शमशेरले मेलवादेवीलाई धेरै माया गरे भनेर यसो गरिएको रहेछ ।
तिमी छौ कि कतै?
सबै काम छोडेर देश पोल्ने काम भो !
मिठो बोलिदिए पुग्छ